भयावह बन्दै चीनमा देखिएको नयाँ भाइरस, १७ सय भन्दाब...
चीनमा देखिएको रहस्यमय भाइरसबाट संक्रमित व्यक्तिको संख्या बढ्दै गएको छ । सरकारी अधिकारीहरुले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकभन्दा बढी संक्रमित भेटिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् ।
भयावह बन्दै चीनमा देखिएको नयाँ भाइरस, १७ सय भन्दाबढी संक्रमित
- व्यस्त जीवनशैलीका कारण अधिकांश मानिसले व्यायाममा ध्यान दिँदैनन् । यसले सबैभन्दा ठूलो असर निद्रामा पर्छ । हामी दिनभर काम गर्दा मस्तिष्क थाकिरहेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा कुनै शारीरिक क्रियाकलाप नगर्दा...
एजेन्सी । तपाईं आफूलाई स्वस्थ र निरोगी राख्न चाहनुहुन्छ ? यो कुरा पक्का छ : उत्तर शतप्रतिशत हो भन्ने नै आउँछ । त्यसो हो भने, आउनुहोस्, तपाईं दैनिक रुपमा यो तालिकाअनुसार उठबस गर्ने बानी बसाल्नुहोस् ।...
काठमाडौं । कफी पिउनाले स्वास्थ्यमा सकारात्मकका साथसाथै नकारात्मक प्रभाव पार्ने एक अध्ययनले देखाएको छ। २० हजार जनामा गरिएको उक्त अध्ययनले सही तरिकाबाट कफी पिउने मानिसहरू धेरै बाँच्छन् भनी उल्लेख गरे...
दैनिक चार घण्टाभन्दा कम सुत्‍ने मानिसलाई क्यान्सरक...
काठमाडौं । हरेक जीवका लागि निन्द्रा आवश्यक छ । निन्द्राले जीवको थकान कम गर्ने र शरीरमा उर्जा बढाउने काम गर्दछ । तर मानवमात्र यस्तो प्राणी हो, जो जानाजान आफ्नो निन्द्राको समय घटाएर आफ्नो उद्देश्य...
जाडोमा मुटु रोगको जोखिम बढी, मदिरा पिएर शरीर तताउन...
काठमाडौं । केन्द्रीय अस्पतालको रुपमा रहेको गंगालाल अस्पतालमा सधै नै मुटुसम्बन्धी बिरामीको चाप हुने गर्छ । अस्पतालले चिसोकै कारण मुटुरोगका बिरामी बढेको भन्ने कारणगत तथ्यांक नराखेपछि औसतमा चिसोको समयमा...
१. पाचन सुधार्छ पाचनलाई सुधार्नका लागि बिहान तातो पानीमा मह र कागती मिसाएर खानुपर्छ। यसले पेट सफा राख्न मद्दत गर्नुका साथै कलेजोमा रसको उत्पादनलाई बढाउँछ, जसबाट पाचन प्रक्रियामा मद्दत मिल्छ। कागतीम...
के हो ब्रोङ्काइटिस ? यस्ता छन् कारण, लक्षण बच्‍ने...
काठमाडौं । श्वासप्रश्वास नलीले फोक्सोसम्म हावा पु-याउने र हावालाई बाहिर निकाल्ने काम गर्दछ । श्वासप्रश्वास नली सुन्निनुलाई चलनचल्तीको भाषामा छातीमा चिसो लाग्नु तथा चिकित्सकीय भाषामा ब्रोङ्काइटिस भनिन्...
मानिसको उमेर बढ्दै जाँदा स्मरण शक्ति बिस्तारै कमजोर बन्दै जान्छ । विकासक्रमको अनुसार व्यक्तिको उमेर ढल्दै जाँदा खासगरी वृद्ध अवस्थामा स्मरण शक्तिमा ह्रास हुनु स्वाभाविक हो । मानिसको सम्पूर्ण ज्ञान, सी...
काठमाडौँ । स्वास्थ्य रहनका लागि हिँड्नु पर्छ । शरीर स्वास्थ्य राख्ने हो भने बिहान कम्तीमा पनि ३० मिनेट हिँड्नु पर्ने चिकित्सकहरुको भनाई छ । बिहानको समयमा हिँड्नु स्वास्थ्यको लागि राम्रो हो । गर्मी मौस...
एजेन्सी । शहरको बसोबास र कम शारीरिक अभ्यासका कारण अधिकांश नेपालीको पेट लागेको छ । पेट जति सजिलै लाग्छ घट्न त्यतिनै मुस्किल पनि छ । त्यसैले तपाईंलाई सजिलै गरी पेट घटाउनका लागि गर्नुपर्ने ८ अभ्यास...
जाडोमा हिटरलाई साथी बनाउनु भएको छ ? सावधान !
एजेन्सी । जाडोसँग जुध्नका लागि हिटरलाई साथी बनाउने प्रचलन बढ्दै गएको छ । चिसिदै गएको वायुलाई सन्तुलित तापमानमा राख्ने कृतिम काइदा हो यो । खासगरी बुढाबुढी, रोगी, सुत्केरीका लागि यस किसिमको व्यवस्था गर्...
स्तन क्यान्सरको समस्या पुरुषलाई पनि !
स्तन क्यान्सरलाई महिलाहरूमा मात्र हुने रोगका रूपमा बुझ्ने गरेको देखिन्छ । तर, पुरुषमा पनि यो देखिन्छ । पुरुषमा महिलाको तुलनामा स्तन क्यान्सर कम देखिन्छ । पुरुषमा स्तन क्यान्सर देखिए त्यो चाँडै फैलन्छ...
काठमाडौं । गलगाँडलाई थाइराइड पनि भन्ने गरिन्छ, जुन सास फेर्ने नलीको बाहिरपट्टि हुन्छ । पुतली आकारमा हुने ग्रन्थीले थाइराइड नामक हर्मोन उत्पादन गर्छ । विभिन्न कारणले उक्त थाइराइड ग्रन्थी बढेमा गलगाँडको...
जाडो मौसममा हृदयघातको जोखिम बढी, कसरी सतर्क हुने ?...
काठमाडौं । जाडोको मौसममा हृदयघातको जोखिम बढी हुन्छ । त्यसैले जाडो याममा सतर्कता अपनाउनै पर्छ, खासगरी हृदयका रोगीले । त्यसैपनि जाडो मौसम मुटु रोगीका लागि अनुकुल मानिदैन । वाह्य चिसोको कारण नसाहरु खु...
जाडो मौसममा हृदयघातको जोखिम बढी, कसरी सतर्क हुने ?
नियमित औषधीको प्रयोगले एचआईभी समक्रमित वर्षौं बाँच...
काठमाडौं । आज डिसेम्बर १ अर्थात विश्व एड्स दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरेर मनाइँदैछ । 'समुदायले फरक पार्छ' भन्‍ने मुल नाराका साथ यो दिवस आज विश्वभर विनिन्‍न जनचेतनामुल...
क्षयरोगबाट बर्सेनि १५ लाखको मृत्यु, कसरी थाहा पाउन...
काठमाडौं । क्षयरोग अर्थात टिबी रोग । धेरैलाई थाहा छ, यो एक सरुवा रोग हो । दुई हप्ताभन्दा बढी समय एकनासले खोकी लाग्नु, खोकीसँगै खकारमा रगत देखिनु, हल्का ज्वरो आउनु क्षयरोगको सामान्य लक्षण हो । क्...
प्रधानमन्‍त्रीको एपेन्डिसाइटिसको शल्यक्रिया सम्पन्...
बढेसकालमा पनि हुन्छ निमोनिया ! यस्ता छन् लक्षण र ज...
काठमाडौं । नेपालमा बच्चालाई धेरै हुने समस्यामध्ये निमोनिया पहिलो नम्बरमा आउँछ। निमोनिया फोक्सोको संक्रमण हुने रोग हो। यो रुघाखोकी बिग्रेर हुन्छ । प्राय बच्चालाई मात्र हुने भनेर बुझिएतापनि यसले बुढेसका...
पर्शुरामका दुई वडामा मलेरियाको जोखिम, १० जना संक्र...
बच्चामा हड्डी कमजोर हुने समस्या कारण र समाधान
काठमाडौं । शरीरमा भिटामिन डी, क्याल्सियम र फस्फोरसको कमीका कारण बच्चाको हड्डीमा देखिने समस्या रिकेट्स हो । रिकेट्स कतिपय अवस्थामा वयस्कमा पनि देखिन सक्छ । जसलाई मेडिकल भाषामा ओस्टियोमिलेसा भनिन्छ । तर...
काठमाडौं । देशभर ३४ लाख दमरोगी भएको एक अध्ययनले देखाएको छ । यो कुल जनसंख्याको ११ दशमलव ७ प्रतिशत हो । नसर्ने रोगको प्रकोप बढिरहेका वेला नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले हालै श्वासप्रश्वाससम...
किन दुख्छ मेरुदण्ड ? यस्ता छन् लक्षण र बच्ने उपाय
काठमाडौं । मेरुदण्ड रोग विशेषज्ञ नेपालमा पनि स्पाइन अर्थात ढाड दुख्ने समस्या बढ्दै गएको बताउँछन् । वरिष्ठ मेरुदण्ड रोग विशेषज्ञ डा. गौरब ढकालले नेपालमा पछिल्लो समय बढ्दै गएको बताए । “मेरुदण्ड...
काठमाडौं । विद्यालय तहमा अध्यापन गरिँदै आएको अनिवार्य विज्ञान विषयमा अब प्रविधि पनि थप गरिएको छ । आगामी शैक्षिक सत्र २०७७ सालबाट विज्ञान तथा प्रविधि विषय अध्यापन गरिने छ । विश्वमा विकास हुँदै गएको...
काठमाडौं । जाडो मौसममा सुन्तला, मौसम जस्ता फलफूलहरु सर्वत्र पाउन सकिन्छ । यद्यपि, भिटामिन सी पर्याप्त मात्रामा समावेश भएको सुन्तला जाडो याममा तपाईंका लागि लाभदायक हुन्छ । यदि तपाईंलाई ब्लडप्रेसर...
प्रधानमन्त्री ओलीको पिसाब नलीमा राखिएको ‘स्टेन्ट’...
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको युरेटर (पिसाब नली) मा राखिएको स्टेन निकालिएको छ । नियिमित स्वास्थ्य जाँचका लागि ग्रान्डी अस्पताल पुगेका युरेटरबाट स्टेन निकालिएको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले बताएका छन्...
जाडो समयमा कसरी स्वस्थ रहने ?
काठमाडौं । सामान्यतया चिसो मौसममा वातावरण प्रदूषण हुने र हावामा ब्याक्टेरीया रहने हुँदा अन्य समयको तुलनामा यो समयमा स्वास्थ्य जटिलता धेरै देखिन्छन् । वृद्धवृद्धा, बालबालिका र गर्भवती महिला बढी प्रभावि...
Suvadin Media 118 0
यस्तो छ शरीरमा देखिने दाग आउनुको कारण र उपचार विधि
एजेन्सी । कहिलेकाहिं शरीरमा कालो वा गाढा निलो दाग देखिने गर्छ । कुनै जनवारले टोके जस्तै लाग्ने यस्तो दाग शरीरमा कसरी भयो ?आश्चर्य लाग्न सक्छ । कसैले त यस्ता दागलाई बोक्सीले टोकेको समेत भन्ने गर्छन्...